Wadama Khaliijka oo Shruudoo Yaableh ku Xidhay dalka Qatar si loo damiyo xiisada dhex taal. – Xeernews24
Wadama Khaliijka oo Shruudoo Yaableh ku Xidhay dalka Qatar si loo damiyo xiisada dhex taal.
Sacuudi Carabiya, Masar, Isutagga Imaaraadka Carrabta iyo Baxrayn ayaa waydiisanaya Qadar in ay xidho oo albaabada u laabto warbaahinta Al-Jazeera.
Waxaa kale oo ay qadar waydiisteen in ay yarayso calaaqaadka ay Iiraan la leedahay, ayna xidho saldhiga uu Turkigu ku leeyahay Qadar, shuruudahaas oo dhanna ay ku fuliso muddo 10 maalmood gudahood ah.
Ma jirto Jawaab deg deg ah oo ay Qatar ka bixisay arintaan, laakiin wasiirka arimaha dibadda dalkaas Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani ayaa horey usheegay ineysan wax wadaxaajood ah la geleyn xulifadda Sacuudiga inta ay xayiraadu saaran tahay.
QODOBADA KALE Waxaa kamid ah
Wakaaladda Wararka AP oo daabacday Koobi laga sameeyay qodobada la hordhigay dalka Qatar ayaa waxaa ay u qornaayeen:
1- In dalka Qatar uu xidhiidhka u jaro dhamaan Ururka Iqwaanu Muslimiin (Muslim Brotherhood) kuwaas oo laga mam nuucay dalalka Carabta.
2- Iney soo wareejiso dhamaad shaqsiyaadka laga doonayo afartaas wadan ee argagaxisadda ah.
3- Iney joojiso maalgelinta kooxaha xagjirka ah ee argagaxisnimo ugu diiwaan gashan Mareykanka.
4- Iney cadeyso ama faah faahiso Macluumaadka ku saabsan tirooyinka mucaaradka kuwaasoo Qatar ayaa maalgeliso kana soo jeeda Saudi Arabia iyo quruumaha kale
5- Iney habeyso siyaasadeeda gaar ahaaneed, dhaqaalaheeda iyo howlgalka khaliijka
6- Iney joojiso maalgelinta Ilaha wararka ee Al Jazeera, oo uu ku jiro Arabi21 iyo Middle East Eye
7- Iney bixiso Lacag aan la cayimid oo magdhow ah
Waxaa jira qodobo kale oo la daabacay kuwaas oo si weyn ay udoonayaan sacuudiga iyo xulifadiisa.
Sargaal aan magaciisa la sheegin oo uhadlay Afartaas wadan ayaa usheegay Wakaaladda Wararka ee Reuters in Qatar ay sidoo kale arimo xasaasi ah ay hordhigtay Dalalka CARABTA.
Arimaha ay hordhigtay waxaa kamid ah iney xidhiidhka u jaraan Kooxda khilaafadda Islaamiga ah ee Daacish, Al-Qacidda iyo Kooxda Shiicadda ah ee Lubnaan ka dagaalanta ee Hezbollah.
Warqado ay baahisay Wakaaladda Wararka AP ayaa muujinaya in Qatar la weydiistay iney guud ahaanba xidhiidhka uj arto dalka Iiraanoo ganacsi xoogan uu kala dhaxeeyo.
Warqadahan waxaa kale oo ka muuqda in la xidho guud ahaanba dhamaan xarumaha Al Jazeera oo ay ku jiraan qeybta ENGLISH-KA iyo Tan Carabiga ku hadasha, TV-gaas ayaa kamid ah kuwa loogu daawashada badan yahay caalamka.
Si kastaba, lama oga hadii Sharuudahan ay yihiin kuwa ay labada dhinac isla fahmi doonaan oo ay ku heshiin doonaan.
1- In dalka Qatar uu xariirka ujaro dhamaan Ururka Iqwaanu Muslimiin (Muslim Brotherhood) kuwaas oo laga mam nuucay dalalka Carabta.
Arimaha ay hordhigtay waxaa kamid ah iney xariirka ujaraan Kooxda khilaafadda Islaamiga ah ee Daacish, Al-Qacidda iyo Kooxda Shiicadda ah ee Lubnaan ka dagaalanta ee Hezbollah.
Warqado ay baahisay Wakaaladda Wararka AP ayaa muujinaya in Qatar la weydiistay iney guud ahaanba xariirka ujarto dalka Iiraanoo ganacsi xoogan uu kala dhaxeeyo.
Warqadahan waxaa kale oo ka muuqda in la xiro guud ahaanba dhamaan xarumaha Al Jazeera oo ay ku jiraan qeybta ENGLISH-KA iyo Tan Carabiga ku hadasha, TV-gaas ayaa kamid ah kuwa loogu daawashada badan yahay caalamka.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/geell-carbeed.jpg 167 301 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-06-23 11:36:402017-06-23 11:43:26Wadama Khaliijka oo Shruudoo Yaableh ku Xidhay dalka Qatar si loo damiyo xiisada dhex taal.
Hal Xaaran ahi Nirig Xalaal ah Ma Dhasho Saylac oo ay Hargeysa Xal iyo Xeelad... Diblomaasiyaddi Jabuuti oo ka Dhamaan la, Dhooqo ay Cagaha la Gasho.